Train Bridges Hadfield Ao Eoropa | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby Switzerland > Train Bridges Hadfield Ao Eoropa
Nandeha lamasinina dia fanta-daza ho an'ny mpandeha nanome ny sasany amin'ireo tsara tarehy indrindra Train Bridges, cinematic tontolo hevitra. Ny fahazoana fahafahana nandeha tamin'ny Train Bridges, hitanao Rolling havoana, ambanivohitra, sy ny ranomasina rehetra avy amin'ny seza mampahazo aina rehefa nandalo Europe amin'ny rail. Indraindray ny lalamby mihitsy no odian-tsy hita ny tena hatsaran-tarehy. Ireo efatra Eoropa lalamby Train Bridges dia haka ny fofonaina izy.
Ny voalohany dia Train Bridges pick Landwasser Viaduct, Soisa
Soisa rail nandehanany
Ity tetezana amin'ny lamasinina ity dia zava-mahatalanjona amin'ny maritrano. Azonao atao ny mahita enina vatosokay tohany sasatra amin'ny andry avo dimy. Ny tetezana dia mitarika mankany amin'ny Landwasser maharitra 216 metatra tonelina.
Ny tetezana ny Landwasser sakan'ny renirano eo amin'ny tanànan'ny Schmitten sy Filisur, ao amin'ny Graubunden area ny Soisa. Fantatra koa fa misy nanambara ny UNESCO World Heritage Site. Izany ao amin'ny asa amin'izao fotoana izao ary efa nanomboka vita amin'ny 1902.
Munich ho Basel Lamasinina
Bern ny Basel Lamasinina
Geneva ho Basel Lamasinina
Mivoaka Railway Bridge, Train-tampon'ny Bridges tany Ekosy
Scotland Rail tetezana
Miampita ny Ony ity fari-tany Skotika mahafinaritra ity No mivoaka avy Queensferry, fotsiny andrefan'i Edinburgh.
Izany dia midika hoe vita tamin'ny vy telo roa-cantilevers nanatevin-daharana ny fahari girders. Huge rivets mifandray ho any amin'ny lehibe firafitry ny Train Bridges. Granita tohana manohana ny cantilevers. Izany tokoa ny Feat ny Victoria injeniera.
Ny fiaran-dalamby tetezana dia vita amin'ny 1890 ary nohavaozina ary repainted in 2011-2012. Ny Forth Railway tetezana efa nisy UNESCO World Heritage toerana satria 2005. Misy eo amin'ny 190 ary 200 Lamasinina mihazakazaka manerana azy io isan'andro.
Hohenzollern tetezana, Alemaina
Mampianatra Germany tetezana
Ny renirano Rhin mizara ny alemaina tanàna Cologne. Fito niampita ny tetezana ony malaza in Cologne. Ny Hohenzollern Train Bridges dia tsy hoe fotsiny ny tsara indrindra, fa be indrindra ihany koa ny lalamby ampiasaina tetezana tany Alemaina. Tsy mahita ny 1200 Mampianatra isan 'andro manerana ny enina lalamby.
Ny Hohenzollernbrücke dia namaritra ny habakabaka tetezana, amin'ny tohany vy telo miaraka ny lavany. Ary dia vita tamin'ny 1911 dia nohavaozina ao amin'ny taona 1940, 1950S, sy ny taona 1980.
Koa satria izany ihany no 409 metatra ny lavany, misy ihany koa ny fizarana ny tetezana ho an'ny mpandeha an-tongotra sy ny mpandeha bisikileta. Misy ny iray teo an-daniny ny fiaran-dalamby lalamby. Nanomboka nametraka ny olona “love padlocks” eo amin'ny fefy eo anelanelan'ny rail sy ny mpandeha an-tongotra hatramin'ny faritra 2008.
Munich any Cologne Lamasinina
Viaduct ny Chamborigaud, Frantsa
Frantsa antitra fiarandalamby tetezana
Ianao nahita izany mahatalanjona semicircular andohalambo Train Bridges ao amin'ny tanànan'i Chamborigaud frantsay, vita tamin'ny 1867. Mbola ampiasaina amin'izao andro izao.
Ny vato viaduct hiampita ny ony Luech. Tena curved tetezana tamin'ny tanteraka halavan'ny 387 metatra. Na izany aza, izany ihany no tena tery amin'ny 14m malalaka. Viaduct ny Chamborigaud ny curve miatrika manokana eo ambony, Tsy toy ny ankamaroan'ny tetezana hafa toy izany.
Santa Giustina Railway Bridge, Italia
Italia fiaran-dalamby ara-tantara tetezana
Ny fiaran-dalamby viaduct dia isa 31 ao amin'ny lisitry ny fiaran-dalamby ambony indrindra eran-tany tetezana. izany mijoro 145 metatra ny haavony sy marina 78 metatra ny lavany. Izany dia midika hoe toerana any amin'ny faran'ny ny Santa Giustina Lake in Dermulo, amin'ny faritra avaratr'i Italia.
Ny Santa Giustina farihy dia manmade sy ny rano izay mikoriana avy amin'izany mamokatra herinaratra. Koa tsara ho fantatra rano fanatanjahan-tena ary canoeing.
Milan mba Dermulo Trento Lamasinina
Turin mba Dermulo Trento Lamasinina
Padua ny Dermulo Trento Lamasinina
Venice mba Dermulo Trento Lamasinina
Vonona ny handray ny lamasinina mitaingina amin'ny Train Bridges ny mahita ireo zava-mahagaga ny olona ezaka? Boky ny seza ary aza mandoa saram misy famandrihana amin'ny www.saveatrain.com.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbreathtaking-train-bridges-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, ary afaka manova ny /tr ny /ru na /fr sy ny fiteny maro.
#Edinburgh #Luech River #Rhineriver #viaduct longtrainjourneys SwissAlps Train Travel travelcologne